Top 5 Free Photo Qaban Software in aad habayso Photos
> Resource > Free > aad habayso Photos la Best Free Photo Qaban Software
Marka aad heysato badan oo sawiro, waxaad u baahan tahay qaar ka mid ah software maamulka sawir si wanaagsan loo abaabulo iyo wadaagno photos digital. Halkan 5 ugu fiican abaabulka software sawir oo lacag la'aan ah ayaa lagu talinayaa in aad abaabulo sawiradaada. Software abaabulka sawir waxay kaa caawin doonaan diyaarin photos galay fayl, iyaga DEAD, oo waxaan ka dhigi sida aad jeceshahay.
Photo Free Abaabulka Software 1. siladda Image FastStone
Siladda Image FastStone ma aha oo kaliya qabanqaabiyaha wanaagsan free image, laakiin sidoo kale browser image ah, Converter oo editor. Waxay leedahay waxyaalo badan sida weyn u qaadidda red-indhaha, marka la barbardhigo sawir, resizing, abuurka, qabsiga midabka sawir, iwm Dhammaan qaabab image caanka ah sida BMP, jpeg, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA, iwm iyo camera digital qaabab cayriin (DRG, CR2, MRW, saxda, SRF, NEF, PEF, RAF, iyo CRW) waxaa taageera abaabulida software image lacag la'aan ah.
Free Photo Qaban Software 2. Google Picasa
Google Picasa waa qabanqaabiyaha a photo lacag la'aan ah aad u functional inay kaa caawiyaan inaad hesho oo dhan aad sawiro iyo kala soocaan sawirada galay albums. Ka sokow, qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka sawir sida la saxo midabka, qaadashada slideshow, iwm waxaa la siiyaa. Picasa ayaa sidoo kale abaabuli kara sawirada dadka Wajigooda. Waxaa dhexgalaan web albums iyo qaybsiga sawir online si aad si fudud photos iyo albums sawirka qoyska iyo saaxiibada wadaagi karo.
Free Photo Qaban Software 3. Xnview
Xnview gelineya inaad si aad u eegto, abaabulo oo loo badalo sawiro aad si fudud oo dhakhso ah. Waxaa si fiican u taageeraa in ka badan 500 oo ah qaabab file iyo in qaab image caanka ah sida GIF, BMP, JPG, PNG, iwm badalo kartaa sawiro Qaar ka mid ah qaababka kale sida bogga internetka ee abuurista, daabacayaa xiriir, diinta ka badan (format iyo Isbadal), bandhigyada slide, screen qabsadaan, iwm dhigo mid ka sii horumarsan. Tani qabanqaabiyaha sawir oo lacag la'aan ah waxaa loogu tala galay inta badan u horumarsan users sawir.
Free Photo Qaban Software 4. Windows Live Photo Gallery
Iyadoo Microsoft Windows Live Photo Gallery, in aad sawiro aad ku dari kartaa qaar ka mid ah keyword tags, ratings, qoraalka, iwm si aad si deg deg ah ka heli kartaa ka dib. Ka sokow, qaar ka mid ah qalab si sahlan loo isticmaalo tafatirka sawir sida gaadhista, midabka, hagaajin macaamiloon, abuurka oo sawir, ka saarida red-indhaha, iwm waxaa la siiyaa retouching sawir fiican. Sidoo kale waa mid aad u fudud in aad email, daabacaan ama daabacato sawiradaada.
Free Photo Qaban Software 5. JetPhoto Studio
JetPhoto Studio gelineya inaad habayso photos digital by qoraalada, keywords, waqtiga iyo meesha. Ka sokow, waxa ay isku technology GPS si loo helo iyo sawiro link khariiradda juquraafi. Hawlaha tafatirka sawir Qaar ka mid ah sida beerista, resizing, isagoo intaa ku daray watermarks, abuurista slideshow photo, iwm waxaa la bixiyaa.
By jidkii, haddii aad wax badan oo sawiro, waxaad samayn kartaa DVD sawir slideshow ah inay si fiican u ilaasho, iyo wadaagaan sawir xasuus aad la software slideshow . Download Free version maxkamad ay halkan:
Kabsado My Photos Free